जस्ले कोरोनालाई पराजित गरे – Sidha Patra
जस्ले कोरोनालाई पराजित गरे
Sidha Patra बुधबार, बैशाख १७, २०७७
कोरोना भाईरसको शुरुआती लक्षण देखिएको ठिक तीस दिनपछि मैले आफ्नो सेल्फ क्वारेन्टिन सकायर परिवारसंग प्रत्यक्ष भेट गरेको छु । एक महिनाको अनुभव एक हरर मुभी (डराउन दिने फिल्म) हेरेको जस्तो नै भएको छ। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा सबै भन्दा खतरनाक देश अमेरिका भएको छ । र यो पंक्ति लेख्दा सम्म अमेरिकामा कोरोनाको संक्रमणबाट ५७ हजार पैसठ्ठी जनाले आफ्नो ज्यान गुमाई सकेका छन र यो पनि केबल ५० दिनको अन्तरालमा। जताततै हाहाकारको स्थिति छ। अस्पतालहरु खचाखच भरिएका छन। अस्पतालले बिरामी लिन अस्विकार गरेपछि बिरामीहरुको मृत्यु आफ्नै घर या अपार्ट्मेन्टमा नै हुने गरेको छ। सरकार, स्वास्थ्य एजेन्सीहरु, बैज्ञानिकहरुबाट पनि कुनै ठोस या सकारात्मक भविष्यको भरोसा दिएको देखिदैन। मानव जाती माथी अहिले कोरोना भाइरसले विजयी पताका फहराई रहेको छ। यो विजयी मार्चको आखिरी गन्तव्य के हो ? कहिले सकिने हो ? कसैले भन्न सकेको छैन। सबैले अड्कलबाजि र आशामा नै चित्त बुझाउनु बाहेक विकल्प छैन।
म आफुलाइ भाग्यशाली नै सम्झन्छु कि यो महामारीको भुमरीबाट अहिलेको लागि बाहिर निक्लन सफल भएको छु। तर ठिक भए पनि चुनौती धेरै छन अगाडी । प्रत्येक कदममा सतर्कता जरुरी छ। सानो लापरबाहीले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्दछ। मेरो यो जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो परिक्षण कालमा मेरो जीवन संगिनी शारदा आचार्य पण्डितले दिएको साहस र सहयोग प्राईस लेस (अमूल्य) छ। लक्षण देखिएको पहिलो दिन देखि नै प्युठान, नेपालबाट मेरी ८३ वर्षीया आमाका उच्च मनोबल र सकारात्मक सोचका वाणीहरु नै कोरोना भाईरसका औषधि थिए। संक्रमणको चपेट परेको बेला मलाई विभिन्न रुपबाट सहयोग गर्नुहुने रिजवुड नेपाली सोसाइटीका पुर्व अध्यक्ष अंकल श्री पराजुली, एन आर एन न्यु योर्क च्याप्टरका अध्यक्ष रामहरी अधिकारी, रोटरी क्लब अफ न्युयोर्क “क्विन्स” का अध्यक्ष नबराज के सी र एन आर एन न्यु जर्सी च्याप्टरका अध्यक्ष समर बुढाथोकी ज्युलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । र अन्त मा विभिन्न सन्चार माध्यमबाट मेरो स्वास्थ सुधारको लागि कामना गर्नुहुने मेरा सम्पुर्ण शुभचिन्तकहरुमा हृदय देखि अभिनन्दन दिन चाहन्छु।